Whitepaper: Maitiro Ekufungidzira Magetsi Anowedzera Sei Mitero Yekutendeuka | Martech Zone
Svondo, November 24, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nyowani yakatumirwa kune yedu Whitepaper Raibhurari (inofambiswa ne PaperShare) ibhuku rakagadzirirwa uye rakagadzirirwa Salesvue neyedu boka. Iyo whitepaper inonzi, Nei Iwe Uchida Maitiro Ekutengesa Ekutarisa.
Salesvue inotarisa kutarisisa kwavo ku pasi peiyo fanera yekutengesa. Kune makambani ane nzira yekutengesa inobuda, ndipo panotungamirwa vatungamiriri vevashandi vekutengesa kuti vatevere.
Dambudziko rinoratidzwa neSalesvue nderekuti mazhinji emabhizinesi ari kusiya toni yemari patafura nekuda kwezvikonzero zvishoma.
Vatengesi zvikwata havana kutengesa kutsvaga kwekushandisa maitiro izvo zvinoita kuti vakwanise kuburitsa chiitiko chakaringana pane tarisiro dzavanadzo.
Zvikwata zvekutengesa zvinowanzove nemitemo isina musoro inovamisa kubva kushevedza tarisiro nekukurumidza.
Vatengesi zvikwata zvinowanzorega kufonera iyo inonyanya kubatsira uye yakakura mikana yechibvumirano nekurega kuonana nekiyi tarisiro.
Salesvue yaona kuti vatengi vanogona kuwedzera chiitiko ne50% uye shanduko nehuremu hwe20% kana kutsvaga otomatiki kuchishandiswa nezvikwata zvekutengesa. Hezvino zvinoita manhamba.
Tags: Kufungidzirakutsvaga kwekushandisamuzvideoWhitepaper
Maitiro Ekugadzira Zvemukati Pfungwa kune Nyowani Mutengi
Nov 27, 2013 pa2: 20AM
Ndatenda nekugovana iyi posvo nesu, izvi zvinondibatsira. Ndokumbirawo kuti mugare muchigovana yako aya marudzi eruzivo, uye zviripachena, ndinokutendai mukuedza kwenyu!